Ahoana ny fampiasana karatra fampidinana ebook | Ireo mpamaky rehetra
Joaquin Garcia | | Tranon'ilay boky, eBooks, orinasa, mpamaky
Tao anatin'izay volana lasa izay dia nitombo be ny isan'ireo karatra fampidinana ebook, ankehitriny maro na tsia ny ankamaroany no manana ny azy manokana karatra fampidinana hividy boky amin'ny fivarotana. Fa ny toa tsotra sy mahasoa, indraindray tsy izy ary misy olona maro izay, na dia te hampiasa an'io kara-karatra io aza izy ireo dia tsy mahalala ny fomba hanaovana azy. Manazava tsikelikely ny fomba fampiasana karatra fampidinana ebook izahay. ny karatra fampidinana izay nampiasainay dia an'ny Tagus na The House of the Book iray izay mety ho hitantsika na aiza na aiza any Espaina taorian'ny fifanarahana tamin'i El Corte Inglés, miparitaka be ny toerana misy azy.
1 Inona no vidintsika rehefa mividy karatra fampidinana isika?
2 Ahoana ny fampiasana ny karatra fampidinana ao amin'ny Tagus Books?
3 Olana rehefa mampiasa ny karatra fampidinana
Inona no vidintsika rehefa mividy karatra fampidinana isika?
Rehefa mividy karatra fampidinana isika dia tsy vitan'ny hoe mividy karatra fotsiny isika fa koa mividy vola na aleo mametraka izany. Io fametrahana io dia atao amin'ny alàlan'ny magazay, ka izany no izy Zava-dehibe tokoa AZA ATAO ATAORANA NY TIKETA satria manana ny PIN an'ny karatra fisintomana izy io ary koa porofon'ny fividiananay. Ny karatra fampidinana dia azo ampiasaina ao amin'ny magazay La Casa del Libro na ao amin'ny Tagus Books, na dia ny karatra alaina boky Tagus ihany no resahina ao. Ao amin'ny ohatra dia nampiasa Tagusbooks aho, fa ny fivarotana roa dia azo ampiasaina.
Ahoana ny fampiasana ny karatra fampidinana ao amin'ny Tagus Books?
Raha tsy voasoratra ara-panjakana isika, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny misoratra anarana amin'ny safidy Fomba fandoavana, etsy ambony ihany Ny carte de crédit, misy fizarana miseho milaza » Tagus fifandanjana"Ary"Reload«, Raha vao sambany ampiasantsika azy ny Balance banga, raha tsy lazao anay hoe ohatrinona ny vola sisa tavela aminay.
Mba hampidirana ny fifandanjan'ny karatra fampidinana, mila miditra ny PIN tapakila isika mividy ao anaty boaty izay miseho taorian'ny fanindriana «Reload«, Na dia voalaza aza«Nomeraon-karatra«, Rehefa tafiditra ny pin, ny vola dia havaozina ao amin'ny Balance, arakaraka ny karazana karatra fampidinana izay efa nampiasainay.
Raha vantany vao naverina namerina ny fifandanjana isika, dia afaka mividy ebook, raha mbola manana fifandanjana ampy isika, amin'ny tsindry tokana na «mividy amin'ny dingana 1".
Olana rehefa mampiasa ny karatra fampidinana
Rehefa nanandrana nampiasa azy aho dia nampitandrina momba ny lesoka izay soa ihany ny zazalahy tagus afaka namaha izany izy ireo. Raha mampiasa ny karatra ianao, misintona mivantana, izany hoe tsy mamerina mandanjalanja, mampiasa ny safidy «mividy amin'ny karatra fampidinana»Hanana olana ianao. Hangataka anao hiditra ao izy ireo Laharana karatra sy PIN, ny Card No. tsy misy ka tena hanome anao olana hatrany. Rehefa nijery ny manodidina aho dia nahita vahaolana tamin'ity olana ity, izay tafiditra amin'ny fidirana amin'ny laharan'ny karatra, fa na dia niditra isa maromaro aza aho dia tsy afaka nanao ilay karatra fampidinana mihitsy tamin'io fomba io.
Heveriko fa ny rafitry ny carte de download ebook dia mila manatsara be hatrany. Ary tsy milaza izany aho satria iray ihany no hitantsika ankoatry ny karatra iTunes, fa satria sarotra be ilay rafitra, misy fotoana angatahany ny nomeraon'ny karatra ary tena antsoin'izy ireo hoe PIN izany ary indraindray ianao lasa adala. mitady ny isa mifanaraka amin'izany. Na dia mila miaiky aza aho fa miasa ho toy ny fanomezana tany am-boalohany. Fa momba izay ihany, Fantatrao ve ny karatra fampidinana ebook mora idirana any Espana? Azonao atao ny maneho hevitra momba ny zavatra niainanao niaraka tamin'izy ireo, afaka manampy mpampiasa maro izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Tranon'ilay boky » Ahoana ny fampiasana karatra fampidinana ebook
efitra mavokely dia hoy izy:
Lahatsoratra mahaliana anao izay tsy fantatro. Araka ny fantatrao, misy rafitra hafa amin'ny fampidinana ebook amin'ny alàlan'ny karatra izay tsy dia manahirana kokoa noho i Tagus. Seebook no iantsoana azy ary hanomboka amin'ny fivarotam-boky Espaniola amin'ity fararano ity. Ny Seebook dia tsy mitaky fisoratana anarana amin'ny tranokala na mifandray amin'ny tontolo iainana mpamaky manokana. Mila miditra ny mailakao fotsiny ianao vao mahazo ilay rohy fampidinana. Ny mpampiasa dia misafidy ny endrika tadiaviny sintonina (mobi, epub ary na ny pdf) aza, hahafahany mamaky amin'ny fitaovana rehetra Ary ny karatra dia mamela anao misintona ireo fampidinana tadiavinao amin'ny endrika tianao sy im-betsaka araka izay itiavanao azy. Afaka mahita bebe kokoa ianao amin'ny http://www.seebook.eu/. (Fialana andraikitra: Izaho no CEO an'ny Seebook! 😉
Mamaly an'i Rosa Sala
Azoko atao ve ny mampiasa karatra mitovy amin'ny kaonty samihafa?
Pentian, sehatra fitadiavam-bola ho an'ny olona